Mpitondra maintso ao Ghana: Masoivoho Mövenpick Hotel Accra
Home » Vaovao momba ny fizahantany tompon'andraikitra » Mpitondra maintso ao Ghana: Masoivoho Mövenpick Hotel Accra
Mövenpick Ambassador Hotel Accra dia hotely kintana 5 ankehitriny, miorina amin'ny oasis an-tanàn-dehibe ao amin'ny distrikan'ny afovoan-tanànan'i Ghana. Ny Ivotoerana ara-bola any Accra, ny ivontoeran'ny varotra manerantany, ny ivon-toeran'ny fihaonambe iraisam-pirenena ary ny minisiteran'ny governemanta dia eo akaiky eo avokoa.
Mirehareha ny masoivoho Mövenpick Hotel Accra nanambara ny fahazoan-dàlana fanindroany Green Globe. Ny mpitantana sy ny mpiasa dia samy niara-niasa tamin'ny fanatsarana ny tanjon'ny hotely maharitra. Vokatr'izany, ny isa amin'ny fanamarinana ankapobeny dia nitombo hatramin'ny 73% ka hatramin'ny 81% raha oharina tamin'ny tamin'ny taona lasa.
Axel Hauser, Tale Jeneralin'ny masoivoho Mövenpick Hotel Accra dia nilaza hoe: "Tena reharehako ny zava-bitan'ny ekipa ary fantatro fa nitaky asa sy fanoloran-tena be tokoa io vokatra tsara io. Ny Green Globe Certification Award dia mampiseho ny fahavononan'ny trano fandraisam-bahiny maharitra haharitra, amin'ny alàlan'ny fampianarana ny ekipa iray manontolo amin'ny fomba ahafahany manatsara. ”
Amin'ny fikatsahana hampiasa maharitra ny loharanon-karena dia nanangona vola mitentina an-tapitrisany dolara tamina tetikasa manokana enina ny hotely izay mikendry ny hampihenana ny fanjifana angovo mandritra ny fotoana maharitra. Tafiditra ao anatin'izany ny fanodinana ny etona avy ao anaty vina mankany amin'ny dehumidifier amin'ny hotely mba hampihena ny angovo ampiasaina amin'ny fanafanana dehumidifiers, ny fametrahana rafitra fanamafisana adiabatic ary ny rafitra fitantanana zavamaniry chiller, ny fanarenana hafanana avy amin'ny chillers, ny fanitsiana ny chiller power factor ary ny fametrahana a mpandahatra fandaharana amin'ny tsingerina mandeha amin'ny paompy.
Mifanaraka amin'ny tetik'asa maharitra maharitra Mövenpick Hotels and Resorts Shine, ny Mövenpick Ambassador Hotel dia namerina ny fiarahamonina tamin'ny alàlan'ny fikarakarana hetsika isan-karazany. Nentanina ireo vahiny hanohana hetsika fitadiavam-bola tamin'ny Desambra lasa teo. Ny vola azo avy amin'izany dia nampiasaina hanaovana lanonana krismasy sy hetsika ara-panatanjahantena ho an'ny ankizy avy amin'ny Kinder Paradise amin'ny Andro Boxing, ny 26 desambra. Ny hotely dia nanasa ny Chance for Children, ONG ho an'ny ankizy an-dalambe ao Accra handray anjara amin'ny lanonana fanaovan-jiro krismasy ihany koa. Mba hanampiana ireo sahirana dia nomena fanomezana ho an'ny hopitaly Princess Marie Louis ary ny bedina efa misotro ronono sy ny lambam-pandriana no natolotra hanohanana leprosarium iray ao an-toerana.
Fotoam-panofanana maro no notontosaina ho an'ny mpiasa amin'ny departemanta rehetra nataon'ny mpitantana ny fanavaozana ny orinasa Jekora Ghana Limited mba hampirisihana ny fomba fanavakavahana fako eo amin'ireo mpiasa. Tamin'ny taona 2016, ny hotely dia nampitombo ny habetsaky ny taratasy sy ny baoritra namboariny 71% (5,026 kg) araka ny tatitry ny Hotel Optimizer izay natambatr'i FARNEK Afovoany Atsinanana mpiara-miasa amin'i Green Globe.
Ny tompona trano vaovao, Quantum Global, dia manolo-tena hanohana hatrany ireo fandraisana andraikitra maharitra amin'ny trano fandraisam-bahiny mba hiantohana fa ny trano dia mitarika ho amin'ny faharetana amin'ny faritra atsimon'i Sahara.
Mövenpick Hotels & Resorts, orinasam-pitantanana hotely manara-penitra iraisam-pirenena misy mpikambana 16,000 mahery, no soloina solontena any amin'ny firenena 24 misy trano fandraisam-bahiny 83, hotely ary mpandeha an-dranomasina Nile miasa ankehitriny. Toerana 20 eo ho eo no kasaina na eo am-pananganana azy, anisan'izany ireo any Chiang Mai (Thailand), Bali (Indonesia) ary Nairobi (Kenya).
Ny fifantohana amin'ny fanitarana ao anatin'ny tsena ifotony any Eropa, Afrika, Moyen Orient ary Azia, Mövenpick Hotels & Resorts dia misahana manokana amin'ny trano fandraisam-bahiny sy hotely fihaonambe, ary koa hotely fialantsasatra, izay taratry ny fahatsapana toerana sy fanajana ireo vondrom-piarahamonin'izy ireo. Ny lova soisa sy ny foibe any afovoan'i Suisse (Baar), Mövenpick Hotels & Resorts dia mazoto amin'ny fanomezana serivisy premium sy fahafinaretana amin'ny culinary - izany rehetra izany miaraka amina fikitika manokana. Manolo-tena amin'ny fanohanana tontolo iainana maharitra, Mövenpick Hotels & Resorts no lasa trano fandraisam-bahiny voamarina Green Globe manerantany.
Ny orinasa hotely dia an'i Mövenpick Holding (66.7%) sy ny Vondrona Fanjakana (33.3%). Raha mila fanazavana fanampiny, tsidiho azafady movenpick.com